Mbido AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW .KWỌ Ndị na-elekọta bọl Frank Lampard Child Story Plus Na-agbaghaghị Ihe Ndị Na-akpata Ihe Ndị E Dere n'Aka
LB na-egosi Full Story of a Football Legend kasị mara aha na aha njirimara; 'Super Frankie'. Anyị Frank Lampard Storymụaka Akụkọ ya na enweghị akwụkwọ akụkọ Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site na nwata ruo n'oge.
Nyocha nke Chelsea FC Legend gụnyere akụkọ ndụ ya tupu ama aha ya, ndụ ezinụlọ ya na ọtụtụ nkwụsị na ON-Pitch amachaghị banyere ya.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ihe mgbaru ọsọ Frankie ma nyere aka na ndekọ yana ihe agha ya ma ọ bụ mmadụ ole na ole na-atụle ndụ ya n'èzí pitch nke na-adọrọ mmasị. Ugbu a na-enweghị n'ihu adieu, ka anyị bido.
Akụkọ Frank Lampard nke nwata - Mmalite Ndụ na Ezin’ụlọ:
Frank James Lampard mụrụ na June 20, 1978, na Romford, London, England site n'aka Frank Lampard, Sr. (nna) na Pat Lampard (nne).
Ọ si n'ezinụlọ ndị na-agba ụkwụ ụkwụ na ọ bụ nwata ọdụ nke nne na nna ya. Maka obere Frank, ọ bụ maka ụlọ akwụkwọ na football.
Frank Lampard bụ nwatakịrị na-enweghị atụ na elu nke klas ya n'oge ahụ mgbe ọ gara Brentwood School site na 1989 na 1994. Ọ gụsịrị GCSEs wee nweta ihe yiri nke A. A hụkwara ịhụnanya ya maka football n'oge ọ bụ nwata.
Dị ka Frankie si kwuo Adị m obere mgbe m malitere mmasị n'ịgba bọl. A mụrụ m n'ezinụlọ ndị hụrụ egwuregwu ahụ n'anya oge niile m nwere ike icheta na m nwekwara.
Abụ m nwa mummy n'ihi na abụ m nwa ikpeazụ. E wezụga ịgụ bọl, ahụrụ m ịgụ ihe n'anya. Mama m bụ onye Liberia mere ka m nwee mmasị ịgụ iheede akwụkwọ. Aga m echeta mgbe West Ham na karịsịa Harry Redknapp na papa m nyere m aka ịmalite ọrụ m.
Frank Lampard Child Story - Ihe Schoollọ Akwụkwọ Ajụjụ:
Mgbe Frankie nọ n'ụlọ akwụkwọ dị ka nwatakịrị, o kpebisiri ike ịghọ ndị na-agba ọsọ ụkwụ kama ịga n'ihu na-elekwasị anya na agụmakwụkwọ maka otu ihe.
nke ahụ bụ 'Iji gosiputa ndi nwere obi abụọ. Ndị nwere obi abụọ ebe a gụnyere ndị enyi ya na onye nkuzi ụlọ akwụkwọ ya. Ugbu a, ka anyị nye gị nkọwa ahụ;
Dị ka Frank Lampard si tinye ya: “N’ụlọ akwụkwọ, echetara m mgbe m dechara akwụkwọ banyere ihe m chọrọ ịrụ n’ọrụ. Enwetara m ndị nrịba ama na onye nkuzi gwara m na ịbụ ndị ịgba bọọlụ abụghị ọrụ.
Ọ gwara m naanị otu n'ime ụmụaka 300 na-eme ya dị ka onye na-agbacha bọọlụ. Ọ na-ajụkwa: 'Ì chere na ị ga-abụ otu?' M kwuru, sị: 'Ee m na-eme'. Mymụ akwụkwọ ibe m ga-anọdụkwa ebe ahụ chịa m ọchị. ”
Nke a bụ oge mgbanwe maka Frankie, oge o kpebiri na ya ga-elekwasị anya na football mgbe ọ gụsịrị akwụkwọ GCSE. Ime uche ya adighi nfe.
Ọ bụ otu onye nkụzi aha ya bụ Mr Bouckley (Pic n'okpuru) nke nyeere ya aka na onye nlekọta dị mkpa na ịkagbu.
Lampard dere, sị: "Bouckley nyeere m aka n'oge ihe siri ike mgbe m na-ekpebi ma m ga-aga akwụkwọ maọbụ ma ọ bụ na agaghị m aga ụlọ ọrụ football," "
agbakwunye: "Aka aka ya, a nabatara agbamume dị n'ụzọ ahụ.
N'ikpeazụ, ọ sịrị: ”Otu n’ime ọrụ dị oke mkpa nke onye nkuzi bụ ịkwalite ụmụ akwụkwọ ka ha mejupụta ebumnuche ha na ebumnuche ha. Mazị Bouckley bụụrụ anyị ezigbo ihe atụ nke ezigbo onye nkụzi ”
Ndụ Frank Lampard:
NME: Nna ya bụ Frank Richard George Lampard mụrụ 20 September 1948 ka Frank Richard Lampard (1920-1953) na Hilda D. Stiles (a mụrụ 1928).
Ọ bụ onye England nke lara ezumike nká ọkachamara lara ezumike nká na-egwuri egwu. Ọ na-arụ ọrụ ka ukwuu n'ime ọrụ ya maka West Ham United nwere mkpirikpi mkpirikpi na Southend United.
O nwere nwanna nwanyị Gwendoline, onye dị otu afọ karịa ya. Ọ dị nanị afọ ise mgbe nna ya nwụrụ na 1953, bụ agadi 33.
Papa Frank Lampard bụ nwanne nwanne nke mbụ Queens Park Rangers na onye njikwa Tottenham Harry Redknapp.
Ọ bụkwa nwanne nna ya na mbụ England, Liverpool, Tottenham na onye Southampton na-egwu Jamie Redknapp.
Mmekọrịta ha mara mma. Site na 1994 rue 2001 rụrụ ọrụ na West Ham dị ka osote onye njikwa n'okpuru Harry Redknapp, ọgọ nwanne ya. Ọ bụ ugbu a ọkachamara na football.
Super Frankie mgbe ọ na-etolite nwere ezigbo mmekọrịta ya na nna ya nke ọ na-ewerekarị dị ka ụbụrụ n'azụ ọrụ ya.
Nne: Late Patricia Harris Lampard bụ nne Frank Lampard. Ọ nwụrụ na 24th nke Eprel 2008 na-esochi nsogbu site na oyi baa. E liri ya n’etiti ndị ezinụlọ ya na-enwe mwute.
A kọọrọ na mgbe ọ nwụsịrị ọnwụ, Callous Burglars gbahapụrụ ụlọ ya na-enweghị ihe ọ bụla iji chọọ ịchọta ọla ya dị oke ọnụ.
Ndị ohi ahụ wakporo ụlọ ahụ, na-ebibi arịa ụlọ ma na-adọpụta kọbọd site na mgbidi ka ha na-achọ - mana ha gbara aka efu ka ihe ịchọ mma niile nke Lampard gara ụmụ ya nwanyị mgbe ọ nwụsịrị.
Ekwenyere na ha abanyela n'ime ụlọ ahụ mgbe ha meghere windo. Ọ dịghị onye ọ bụla nọ n'ụlọ ahụ n'oge ahụ.
Mr Lampard Snr gwara Sun: 'Ha mere ọgba aghara. O doro anya na ha na-achọ ego ma ọ bụ ọla ma ọ nweghị ihe ọ bụla n'ebe ahụ. Enwere ụfọdụ ihe eji achọ mma ma ha anaraghị ya. Ha maara ihe ha chọrọ.
Frank Lampard Na-ahụ Ndụ:
Frank Lampard hụrụ onye nlereanya Spanish bụ Elen Rivas n'anya. Ọ bụ ezie, Ọ dịghị mgbe ya na ya rụrụ ebe ịchụàjà.
Ya na Elen Rivas nọrọ afọ asaa, onye ya na ụmụ nwanyị abụọ Luna (mụrụ 22 August 2005) na Isla (amụrụ 20 May 2007), tupu ha ekpebie ịkewa na 2009.
N'afọ ahụ 2009, Frank zutere nwanyị ọzọ. Frank na Piers Morgan nọ n'ụlọ mmanya mgbe Christine batara n'ụlọ mmanya ahụ, Frank sị,
"Onye bụ onye ahụ? Ọ dị iche iche…Ọ mara mma. ” ... “Ọ ka lere gị anya dị ka onye òtù ọlụlụ. Cheedị na ọ hụkwara gị n'anya nakwa na ọ ga-enwekwa mmasị n'ebe ụmụ agbọghọ gị nọ! ” Piers kwuru.
Ọzọ ihe, ha na-ọnụ. N'echi, Frank gara igwu egwu England ma ha na-ekwu okwu kwa abalị ruo awa anọ ma na-ada ada n'ịhụnanya naanị n'otu izu.
Lampard nọ na mmekọrịta onye na-egosi telivishọn Christine Bleakley kemgbe ahụ. Na 15 June 2011, onye ọrụ Lampard kwupụtara ọkwa ha.
Di na nwunye ahụ lụrụ na Disemba 20, 2015, mgbe ha rụchara ọrụ afọ anọ.
Ọ bụ ihe na-akpali mmasị ịchọta na ụmụ nwanyị Frankie sitere na mmekọrịta ya na Elen Rivas na Christine na-eme nke ọma.
'Mgbe ụfọdụ, Christine na ụmụ agbọghọ ahụ na-eme m ọnụ,' ndị na-ama jijiji kwuru.
Frank Lampard gara n'ihu...'Fma ọ bụ m, nke ahụ dị mma, n'ihi na ịbanye n'ime mmekọrịta, ọrụ nne na nna na-esi ike. Iji ruo ebe m na-ahụ ụmụ agbọghọ na-asị, "Anyị nwere Chris na anyị hụrụ gị n'anya Chris, dị mma."
O kwukwara, sị: 'N'oge ahụ, enwere m otu afọ nke ịbụ nna m na-azụ ụmụ ma ọ bụ ihe siri ike. Ana m echeta mgbe m na-alaghachi n'ọrụ, ike gwụrụ, ma hụ na ha etinyewo ọgba aghara n'ime ụlọ ha, enwere m nkụda mmụọ. N'ezie, ọ nyeere m aka inwe Christine na njikọ ya na ụmụ agbọghọ ahụ. '
Ebe ụmụ ya ndị nwanyị na-eru afọ iri na ụma ugbu a, Frank kwuru na ọ chọghị imebi ha site n'inye ha nnukwu ego. Ọ na-agba ha ume ka ha pụọ ​​gaa kpata ego nke ha. Site na nke a, ha ga-enwe ekele maka ndụ karịa.
Ọ sịrị: 'Ana m enye ha ọtụtụ ego kachasị na Christmas na ụbọchị ọmụmụ ha, a na m eme ike m niile mana achọghị m ibupu ha site na imebi ha.
Achọghị m ọnya nke 13 ma ọ bụ 14. M ka na-agwa ha ka ha gaa kpata ego nke ha. N'ụzọ nkịtị, ha na-enweta ego akpa ego £ 5,000. '
Frank Lampard Biography - Ọ Na-akwa ụta ịhapụ Ya:
Nwanyị nwanyị Frank na nne ụmụ Frank, onye Spain bụ Elen Rivas, kwetara n'oge na-adịbeghị anya ọ ka hụrụ kpakpando ahụ n'anya ma nwee olile anya ime ka ya na ya dị n’udo - n’agbanyeghi mmekọrịta ọhụụ ya na Christine Bleakley.
Ọ nọ na mba ahụ ka akụkọ banyere Lampard na Christine nwee mmekọrịta. Miss Rives na ụmụ ya nwanyị ndị ọzọ, Luna, anọ, na Isla dị afọ abụọ na-ebi ugbu a n'ụlọ ime ụlọ isii nke Lampard zụtara maka nde 2.85 XNUMX.
Obi ajị obi Spanish na-agbawa obi kwụsịrị agbamakwụkwọ ahụ mgbe ọ chechara na Lampard jikọtara ya na ụmụ nwanyị abụọ ọzọ ma mee ka o doo anya na obi gbawara ya.
N'okwu ya; 'O wutere m nke ukwuu. O mebiri obi m kpamkpam, m bere ákwá. Ma eleghị anya, m na-eme ọsọ ọsọ ịhapụ ya na ndụ m '…
Ma taa, Miss Rives kwuru na ya enweghị ike iche ihu ịmalite mmekọrịta ọzọ, na-asị: 'Ọ gaghị adị mma ya ịmalite mmekọrịta ọhụrụ mgbe ọ ka na-eche banyere Frank.
O kwusiri ike na ya agaghị eso ndị na-agba ama egwuregwu ọzọ, na-agbakwunye: 'Mba, mba, mba. Ajuola m na ụbọchị, n'ezie, ha bụ ndị ọgba bọọlụ ndị ọzọ, mana m na-asị mba ọ bụla.
O kwetara na ya na-agba mgba, dịka o kwuru: 'Frank na-akwado ụmụaka, mana m ga-arụ ọrụ. N'ụzọ doro anya, ọ nyere m ụlọ ahụ, mana m ga-eme onwe m.
O siri ike ịbụ otu nne. Owu na-ama m mgbe ụfọdụ. Iwe na-ewe m, mana m ga-adị ike. Enwere m oge mgbe m chọrọ ịkwa ákwá na nzuzo, mana ụmụ m na ndị enyi m na-agafe m. '
Mgbe o kwusiri ike na Lampard agafeela, Rives kwesịrị itinye uche na iwughachi ndụ ya na ọrụ ya. Ọ na-emezigharị onwe ya dị ka onye na-ese akwa nwanyị, na-ewepụta nchịkọta ọhụrụ maka Tesco.
Frank Lampard akụkọ nke na - enweghị isi akụkọ - Ihe kpatara ụfọdụ ndị America ji kpọ ya asị:
Na 23 Septemba 2001, Frank Lampard, ya na mmadụ atọ ndị ọzọ na-egwu Chelsea kwụrụ ụgwọ izu abụọ site na klọb maka omume ya ebe ị na-a drinkingụ mmanya na 12 Septemba.
Nke a bụ obere oge elekere asatọ mgbe mwakpo Septemba 8 na United States. A tụrụ anya na onye ọ bụla nọ na Britain ga-anọ n'ọfụma ma mmanya na-egbu Frank Lampard merụrụ n'abalị nke ọtụtụ ndị njem nleta America.
Lampard na ndị enyi ya megburu ndị njem nleta America na ụlọ nkwari akụ Heathrow obere oge 11 September ọgụ. Otu onye njikwa ụlọ ọrụ kwuru, “Ha jọgburu onwe ha. O yiri ka ha achọghị ịma ihe merenụ ”.
Frank Lampard Biography Eziokwu - Ọ nọrọ oge na mbinye ego na Swansea City:
O tinyere oge na mbinye ego na Swansea City Laghachite ọrụ ya, Lampard tinyere oge na mbinye ego na Swansea City. Ọ pụtara n'egwuregwu itoolu n'etiti October 1995 na January 1996.
Frank Lampard Biography - Isi nke IQ:
Mgbe ị na-ekiri Frank Lampard na pitch, o doro anya na ọ bụ onye nwere ọgụgụ isi nwere ọgụgụ isi ma gụọ egwuregwu ahụ nke ọma.
Ọ bụghị naanị ya football IQ na elu. O dekọkwara nnukwu akara IQ nke 150 n'oge ya na Chelsea. Nke a bụ otu akara akara kachasị elu nke ụlọ ọrụ na-eme nyocha ahụ.
Dabere na akụkọ ndị Chelsea FC Dọkịta Bryan Bekee rụrụ,
'Lampard bụ otu n'ime ndị nwere ọgụgụ isi na football dịka nyocha ya nke IQ gosipụtara. Frank Lampard meriri otu akara akara kachasị elu -IQ nke 150- nke ụlọ ọrụ na-eme nyocha ahụ.
Akwụkwọ Frank Lampard - O deela 18 maka ụmụaka:
Frank Lampard bụ n'ezie onyinye pụrụ iche. Maka ihe omume ntụrụndụ ya, Frank hụrụ ịgụ, ide na ịgba bọl. O nwere ike ijikọta ide akwụkwọ Frankie's Magic Football na igwu egwuregwu ahụ mara mma, enweghị mmasị na ịgụ akwụkwọ ya.
Osisi bụ akwụkwọ edemede akwụkwọ ụmụaka na akwụkwọ 18 maka aha ya.
O dekwara ihe ndekọ autobiography; Ezigbo Frank: The Autobiography nke Frank Lampard.
Lee ụfọdụ Ajụjụ
Nke mbu, olee otu i siri mara echiche banyere akwukwo akwukwo anwansi?… Frank zara…
'I nwetara echiche site n'ịgụ akụkọ ndị ọzọ nye ụmụ m nwanyị abụọ. Hụ football dị ka akụkụ buru ibu nke ndụ ya, echere m na ọ ga-abụ ihe na-atọ ụtọ ịmepụta akụkọ gburugburu football anwansi maka ụmụ okoro na ụmụ agbọghọ.
Nke abuo, Ogologo oge ole ka o were dee ha?… Frank Responds.
'Akwụkwọ ọ bụla were m ogologo oge ide. M na-edetu ihe mgbe m nwere echiche na oge dị iche iche wee tinye akụkọ ahụ mgbe m nọ n'ụlọ ma ọ bụ na-eme njem maka bọọlụ.
Ọ pụtara na fim ndị okenye na Rio Ferdinand:
Na 2000, Lampard, Rio Ferdinand na Kieron Dyer pụtara na oge ịse vidio ndị okenye na-ese na ezumike ezumike Ayia Napa na Saịprọs. N’uzo obula echefuru ọnọdụ ahu dum dika Lampard na ekwu okwu ya n’elu olulu.
Ngwaahịa nke West Ham:
Ọrụ ogologo oge nke Lampard malitere na West Ham United (ebe nna ya na-egwuri egwu), mgbe ọ sonyechara ndị ntorobịa na 1994.
Otu afọ mgbe nke ahụ gasịrị, ọ bịanyere aka na nkwekọrịta ọkachamara mbụ ya wee banye na mbinye ego na Swansea ebe o mere ọhụụ 9 wee merie ihe mgbaru ọsọ 1st ya.
Ọ gbajiri na West Ham malite 11 na oge 1996/1997, mana ụkwụ gbajiri agbaji ga-akwụsị mkpọsa ya n'oge. Ya na ndị enyi ya abụọ (Ashley Cole na John Terry) masịrị oge na-esonụ.
Frank weere ihe mbụ ya na oge 1998 / 1999 maka ụlọ ọrụ ahụ. Ọ bụ isi ihe na-enyere ndị Hammers aka kasị elu mgbe Njikọ Njikọ (5th).
Frank Lampard Biography - Ihe kpatara o ji egosi Sky:
Ana m atụtụ aka maka nne m nwụrụ anwụ na obere nwa m nwanyị, Luna. Aha ya na Spanish pụtara 'ọnwa'. Nke ahụ malitere mgbe a mụrụ ya, doro anya.
Isusu ọnụ mgbanaka ahụ dị na mkpịsị aka m bụ maka enyi m nwanyị. Ya mere, ọ sitere na ezinụlọ, " kwuru na mba England.
Ememe Badgekissing ya na-egosi ịhụnanya ya na iguzosi ike n'ihe nye Chelsea FC. Agbanyeghị, ajụrụ ajụjụ a mgbe ọ kwenyere igwu egwu maka Man City yana ọbụlagodi megide Chelsea ọ hụrụ n'anya.
Frank Lampard Biography - oringchekwa megide Chelsea:
Frank Lampard hapụrụ fọrọ nke nta ka ọ ghara ikwu okwu mgbe ọ gbasasịrị ihe nhata maka ụlọ ọrụ ọhụrụ ya bụ Manchester City na 1-1 na Chelsea na Etihad.
Akụkọ akụkọ Chelsea Lampard, onye nọrọ afọ iri na atọ na Stamford Bridge, bụ nke ndị ọbịa bịara ileta ya mgbe ọ bịara n'ụlọ bench mana ọ kụrụ nkeji ise site na mgbe James Milner họpụtara ya iji kagbuo onye mmeghe nkeji iri asaa na otu nke Andre Schurrle.
Nwa nke 36 kwuru na ọ naghị eme ihe mgbaru ọsọ ahụ, o kwetara na mmetụta uche ya.
Dị ka ya: “Ọ bụ ezigbo nsogbu. Agaghị m arụ ọrụ ma ọ bụrụ na abịaghị m rụọ ọrụ m, n'ihi ya ana m anwa ịbanye na igbe ahụ ma ọ bụ nnukwu bọl si Milly.
O siiri m ike. Enwere m afọ 13 dị ịtụnanya na ndị na-akwado Chelsea, ya mere ana m agwakọta ya. O doro anya na enwere m obi ụtọ na otu ndị m na-egwuri egwu maka ịbịaru na ọ bụghị ọnwụ.
Obi dị m ụtọ na enweghị m akara mgbaru ọsọ nke ga-eme ka ha tufuo egwuregwu ahụ. Efuola m maka okwu. Anaghị m atụ anya ịbịa na akara dị ka nke ahụ.
Ndị na-akwado Chelsea na-abụ abụ oge m bịara, nke ahụ na-emetụkwa n'ahụ. Mgbe ahụ, m na-egwuri egwu maka klọb a, ndị jidere m nke ọma, yabụ anọ m n'etiti ebe a.
Onye isi obodo bụ Manuel Pellegrini na-ekwu na ya echeghị ugboro abụọ banyere iji Lampard.
Ọ sịrị: “Ajụrụ m ya ma ọ chọrọ itinye aka na, yana ọchọrọ itinye aka. Nke ahụ na-egosi etu Lampard ọkachamara si dị ukwuu.
Ọ gara n'ihu… "Ekwenyesiri m ike na obi adịghị ya ụtọ ịmegide ụdị otu egwuregwu dị mkpa na ọrụ ya, mana ọ bụ ezigbo ọkachamara, ọ bụ ezigbo ọkpụkpọ."
Onyeisi Chelsea Jose Mourinho, onye Lampard bụ onye dị mkpa n'oge mbụ ya na Stamford Bridge bụkwa ihe ọmụma banyere ihe mgbaru ọsọ ahụ.
Mourinho kwuru, sị: “Ọ bụ onye ọkpụkpọ Man City. Ekwetaghị m na akụkọ ihe mere eme nke agụụ na obi, ekwetaghị m na ndị a.
Ma eleghị anya, m na-eto eto na football. Mgbe ọ kpebiri ịbịa Man City, onye na-asọ mpi Chelsea, akụkọ ịhụnanya akwụsịla. Ọ rụrụ ọrụ ya dị ka ọkachamara ọkachamara ọ nwere, o mekwara nke ọma. ”